किन घट्याे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य ? यस्ता छन् कारण - DURBAR TIMES
HomeEconomyकिन घट्याे इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे शेयर मूल्य ? यस्ता छन् कारण
बजार केही तलमाथी भएपनि लगातार तल या लगातार माथी रहिरहँदैन । त्यसैले यस्ताे अवस्थामा दुःखी भएर हतार हतार बजारबाट बाहिरिन खाेज्नु हुँदैन । शेयर बजारमा धैर्य गर्न सक्नुपर्छ ।
केही समय अघिदेखि दाेश्राे बजारमा काराेबार भैरहेकाे नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकाे शेयरमूल्य हाल १४०० काे हाराहारीमा छ । दाेश्राे बजारमा काराेबारमा आएकाे केहीसमयपछि याे कम्पनीकाे शेयर मूल्य ५०० काे हाराहारीमा भएकाे अवस्थामा अहिलेकाे जस्तै बजारमा हलचल मचाएकाे थियाे । तर त्यसपछि उकालाे लागेकाे यसकाे मूल्य १८०० सम्म पुगेकाे थियाे । कतै इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंककाे पनि पुनर्बीमाकाे जस्तै हुने त हैन ? भन्ने जिज्ञासाहरू पनि बजारमा सुन्न पाइन्छ ।
Previous articleनयाँ पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउने तयारी , ३ अर्बकाे आईपीओ ल्याउने प्रस्ताव
Next articleहिजो ११०० बढेको सुनकोको मुल्य बुधबार ओरालो लाग्यो